Mishiinka HIV-ga lagu eego oo markii u horeysay laga bilaabay in lagu iibiyo Online gudaha UK |
Mishiinka HIV-ga lagu eego oo markii u horeysay laga bilaabay in lagu iibiyo Online gudaha UK
Waxa maanta si rasmi ah oo sharci ah dalka Uk looga iibin karaa oo waliba dhinaca Online-ka ah qalab lagu ogaan karo HIV adigoon tegin meel caafimaad muddo ka yar 15 daqiiqo oo kaliya gudaha Ingiriiska, Scotland iyo Walsh-ka.
Sida qalabyada kale oo kale uma baahan doontid in dhiigaaga loo diro shaybaadh si loo helo inuu HIV ku jiro jidhkaaga iyo in kale, balse mishiinkaa yari 15 daqiiqo ka bacdi wuxuu kuu sheegayaa jawaabtaada.
Mishaankan yari wuxuu u shaqaynayaa in lagu shubo dhibic yar oo dhiig ah oo faraha laga qaado, dabadeena wuxuu ku tusayaa haddii uu ku hayo HIV laba layn oo kalarka Purple-ka, sida Mishiinka yar ee uurka lagu eego oo kale (Pregnancy test).
Mishiinkan yar oo loogu magac daray (Do-it-yourself) waxa sameeyey Company-ga la yidhaahdo Bio Sure UK waxaana laga iibsan karaa kaliya Online-ka.
Haddii uu kuu sheego inaad HIV jidhkaaga jiro waxaad u baahan tahay in aad dhakhaatiir la xidhiidho si inta uu cudurku kugu cusub yahay daawayn laguu siiyo, si aanad ugu talaalin dadka kale, sidaa waxa yidhi xeel dheerayaal caafimaad.
Waxa la rumaysan yahay in mishiinkan yari wax ka tari doono 26,000 ee ruux ee qiyaas ahaan qaba xanuunkan oo aan wali laga daawayn.
Mishiinkan yar ayaa qiimihiisu noqonayaa wax ka yar 30 Pound ee lacagta Ingiriiska, mishiinkan yar wuxuu 99% si sax ah u sheegayaa marka uu jidhka ku jiro Virus-ka HIV muddo saddex bilood ah.